» शंकर योङहाङ र मेलिना राईको ‘दुनियाँलाई दूर राखौँला’ सार्वजनिक हुँदै
शंकर योङहाङ र मेलिना राईको ‘दुनियाँलाई दूर राखौँला’ सार्वजनिक हुँदै
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १२:५९
मकवानपुर, २१ साउन । अहिले नेपाल स्टार गायन रियालिटी शोमा चर्चा कमाईरहेका चर्चित प्रतियोगी शंकर योङहाङ र चर्चित गायिका मेलिना राईको आवाजमा रहेको नयाँ गीत सार्वजनिक हुने भएको छ । शंकरले सामाजिक सञ्जालमार्फत गीतको पोष्टर सार्वजनिक गर्दै आफ्नो पहिलो अफिसियल गीत आउन लागेको जानकारी दिएका हुन् ।
‘दुनियाँलाई दूर राखौँला’ बोलको उक्त गीतको पोष्टर सार्वजनिक गर्दै शंकरले लेखेका छन्–‘ल है साथीहरू…मेरो गितको म्यूजिक भिडियोको फस्र्ट लुक आज सार्वजनिक भएको छ । अब भने एकदमै चाडैँ नै बजारमा रिलिज हुँदैछख।खतपाईंहरूको साथ र सहयोगको आशा राख्दछु । धन्यवाद ।’
शंकरको म्युजिक भिडियोमा विकाश लामिछाने र रिचा थापाले अभिनय गरेका छन् । म्युजिक भिडियोलाई किरण दाहालले तयार पारेका हुन् । म्युजिक भिडियो चाँडै रिलिज हुने गायक योङहाङले जनाएका छन् । शंकर यसअघि नेपाल आईडलमा समेत सहभागी भएका थिए । उनी विभिन्न सांगितिक कार्यक्रमहरुमा पनि सक्रिय छन् । उनी नेपाल स्टारको दोस्रो राउण्ड पार गरी तेस्रो राउण्डमा पुगेका छन् । हेर्नुहोस् पोष्टर–
वेबसाईटमा समाचार वा आर्टिकल अपडेट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
के तपाई न्युज वेबसाईट वा ब्लग चलाउनुहुन्छ ? के तपाई समाचार वा तपाईको आर्टिकल भाईरल गराउन चाहानुहुन्छ ? अथवा के तपाईलाई समाचार वा आर्टिकल अपडेट गर्दा विभिन्न समस्याहरु भइरहेको छ ? यदि छ भने यो भिडियो तपाईहरुकै लागि हो । यस भिडियोमा हामी समाचार वा आर्टिकल अपडेट गर्दा हेडलाईन्, हाईलाईट,क्याटगोरी र ट्यागको महत्व के छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ । साथै समाचारमा वा आर्टिकलमा ठ्याक्कै मिल्ने साईजको फिचर ईमेज कसरी बनाउने वा कुन साईजको बनाउने र समाचार शेयर गर्दा तस्बिर नआउने समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ । सबै जानकारीकालागि भिडियोलाई अन्तिमसम्मै हेरिदनुहोला । च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राईब गरिदिनुहोला ।